Oasisthetoo: March 2013
သူတည်းတစ်ယောက်၊ ကောင်းဖို့ရောက်မူ၊ သူတစ်ယောက်မှာ၊ ပျက်လင့်ကာသာ၊ ဓမ္မတာတည်း။
ရွှေအိမ်နန်းနှင့်၊ ကြငှန်းလည်းခံ၊ မတ်ပေါင်းရံလျက်၊ ပျော်စံရိပ်ငြိမ်၊ စည်းစိမ်မကွာ၊ မင်းချမ်းသာကား၊ သမုဒ္ဒရာ၊ ရေမျက်နှာထက်၊ ခဏတက်သည့်၊ ရေပွက်ပမာ၊ တစ်သက်လျာတည်း။
ကြင်နာသနား၊ ငါ့အားမသတ်၊ ယခုလွှတ်လည်း၊ မလွတ်ကြမ္မာ၊ လူတကာတို့၊ ခန္ဓာခိုင်ကျည်၊အတည်မမြဲ၊ ဖောက်လွဲတတ်သည်၊ မချွတ်စသာ၊ သတ္တဝါတည်း။
ရှိခိုးကော်ရော်၊ ပူဇော်အကျွန်၊ ပန်ခဲ့တုံ၏၊ ခိုက်ကြုံဝိပါတ်၊ သံသာစက်၌၊ ကြုံ
လတ်တုံမူ၊ တုံ့မယူလို၊ (စိတ်မြဲသို၍) ကြည်ညိုစိတ်သန်၊ သခင်မွန်ကို၊ ချန်ဘိစင်စစ်၊ အပြစ်မဲ့ရေး၊ ခွင့်လျှင်ပေး၏ (သည်)၊၊ သွေးသည်အနိစ္စာ၊ ငါ့ခန္ဓာတည့် (တည်း)။ ။
(Release from Anger )
Oftenaman suffers destruction
In order thatanother man
Might enjoy well-being.
Such is the nature of things!
A courtier's satisfaction
In enjoying kingly confidences
In golden palaces
AnaKing's own good fortune
Are merely bubbles
On the surface of vast ocean
Momentary and evanescent.
If dictated by commiseration
I were to be released
And freed from execution
I would not escape Death.
Inseparable am I from Karma
Being subject to dissolution.
Respectfully I salute His Majesty.
Should I again meet my lord the king
In one of my future rebirths
Begrudging him nothing
I would lovingly forgive him.
Impermanent is my body of blood.
(Translated by U Phay Mg Tin)
Posted by Oasisthetoo at 8:30 PM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာကုန်သော်လည်း မကုန်နိုင်သော ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရားရှင်၏ ဂုဏ်တော်နှင့်ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်းတို့သည်၊ လူနတ်ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါတို့ ဆောင်လွယ်, မှတ်လွယ်, သိလွယ်ရုံမျှ၊ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်း ဟု အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်၏။ယခုမြတ်စွာဘရား၏ စွယ်တော်မြတ်မူရင်းနှင့် ကုသိုလ်ယူကြပါ။
ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်း သည်၊ ဘုရားကို ဆည်းကပ်ကိုးကွယ်သူတို့၏၊
ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် ဟုတ်,မဟုတ် စစ်တမ်းထုတ် ရွေးချယ်မှုအတွက်၊ မှတ်ထင်စစ်ဆေးရန် စံနှုန်းများပင်ဖြစ်၏။ ဘုရားစစ် ဘုရားမှန် ဧကန်ဖြစ်က၊ ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်းနှင့် ပြည့်စုံရ၏။ ဘုရားတရားသံဃာဆရာအမိအဖများကိုလည်း ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်းနှင့်ကုသိုလ်ပေးဝေအပ်ပါတယ်.။
ပဌာန်း (၂၄)ပစ္စည်း ၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်များကိုကုသိုလ်ယူကြပါ..
Posted by Oasisthetoo at 6:28 PM No comments: Links to this post
Labels: ဗဟုသုတ, ဘာသာရေ
၁) သင့်လည်ချောင်းထဲက ယားနေတယ်ဆိုရင် နားရွက်ကိုကုတ်လိုက်ပါ... နားရွက်မှာရှိတဲ့ အာရုံကြောတွေကိုလှုံ့ဆော်မိတဲ့အခ
ါ အဲ့ဒီအာရုံကြော တွေဟာ လည်ချောင်းထဲက ကြွက်သားတွေကို အလိုအလျောက် ရုတ်တရက် တုံ့ပြန်စေပြီး ယားယံမှုကို ပျောက်ကင်းပါလိမ့်မယ်....
၁၄) ကြို့ထိုးနေသလား... လက်မနဲ့လက်ညိုးကို ကြို့ထိုးမရပ်မချင်း မျက်ခုံးပေါ်မှာဖိထားပါ... မကြာပါဘူး... ခဏနေရင် ရပ်သွားပါလိမ့်မယ်..
Posted by Oasisthetoo at 8:38 PM No comments: Links to this post
Blogger Post : http://buddhismbeams.blogspot.com/2013/03/blog-post.html
လူသေပြီးနောက် တစ္ဆေသူရဲဘ၀နှင့် (၇)ရက်နေပြီးမှ တစ္ဆေသူရဲဘ၀ကို ကြားခံထားပြီးမှ
ဘုံဘ၀တစ်ခုခုသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိသည်ဟူသော အယူမှာ "အန္တရာဘ၀၀ါဒ" ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း အန္တရာဘ၀၀ါဒ သည် ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဓမ္မ နှင့် ဆန့်ကျင်ခြားနားသော အယူဝါဒ ဖြစ်ပါ၏။
ဗုဒ္ဓဒေသနာတော်အရမူ လူကွယ်လွန်သောအခါ စုတိစိတ်ချုပ်ပြီးနောက်
နောက်တစ်ဘ၀မှာ ပဋိသန္ဓေစိတ် (ချက်ချင်း) ဖြစ်သည်ဟု ဆိုပါသည်။
တစ်ခါက ပြင်သစ်ပညာရှင်များက ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီးအား
"၀ိညာဉ်သည် အတွယ်ရှိမှ ဖြစ်ပါသလား (သို့) မတွယ်မီ အလွတ်အလျောက် ဖြစ်နေပါသလား။ အစိမ်းတစ္ဆေဖြစ်သည် ဆိုသောစကား မှန်ပါသလား"
ဆရာတော်ဘုရားကြီးက- "အတွယ်ရှိမှ ဖြုတ်သည်။ အတွယ်မရှိမီ အကြားမှာ တစ်စုံတစ်ခုသော အဖြစ်၌ အလွတ်အလျော်ဖြစ်၍နေရသည် မဟုတ်ပေ။
အတွယ်မရှိမီ အကြားမှာ တစ်စုံတစ်ခုသော အဖြစ်၌ အလွတ်အလျောက်ဖြစ်၍
နေရသေးသည်ဟူသော အယူသည် အန္တရာဘ၀ဒိဌိ အယူမည်၏။
ထိုအယူကို ဗုဒ္ဓဘာသာကျမ်းဂန်တိ်ု့၌ ပယ်ဖျက်လျက်ရှိကြ၏။
ကွယ်လွန်သောအခါ သူပြုခဲ့သောကံနှင့် လျော်ညီထိုက်တန်သည့် ဘုံဘ၀သို့ ရောက်ရပေသည်။ ကွယ်လွန်သူ၌ အားအရှိဆုံးဖြစ်သော 'ကံ' တစ်ခုသည်
မိမ်၏သက်ဆိုင်ရာဘုံ၌ မိမိနှင့် သက်ဆိုင်ရာဘ၀ကိုသာ ဖြစ်စေပါ၏။
ဘ၀သစ် ပဋိသန္ဓေစိတ်သည် ချက်ချင်းဖြစ်ပေါ်ကြောင်းကို
ကျေးဇူးရှင် အရှင်ဇနကာဘိဝံသ ဆရာတော်ကြီးကလည်း ဤသို့မိန့်တော်မူခဲ့ပါ၏။ လူတစ်ယောက်၏ နောက်ဆုံးစုတေစိတ်နှင့် ဘ၀သစ်ပဋိသန္ဓေစိတ်သည် လက်ဖျောက်တစ်ချက်တီးချိန်ကို
ဘ၀ဟောင်းကစုတေသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ဘ၀သစ်မှာ ဖြစ်ရတော့၏ ဟုဆိုလိုသည်။
အိမ်အနီးအပါး၌ တစ္ဆေပြိတ္တာဖြစ်နေသူများသည် ထိုတစ္ဆေ္ဆဘ၀မှာပင် အသစ်ဖြစ်ရ၏။
နတ်ပြည်နှင့် ငရဲပြည်သို့ ရောက်မည့်သူလည်း
ထိုအတောအတွင်းမှာပင် ထိုဘ၀သစ်၌ ဖြစ်ပြီးလေ၏။
ထို့ကြောင့် အလောင်းကောင်ကို သင်္ချိုင်းမှာဖြစ်စေ၊ အိမ်မှာဖြစ်စေ
သရဏဂုံတင်ကြောင်းကို သေလွန်သူတို့သိဖို့အရေးမှာ အလှမ်းဝေးလှချေ၏။
သိမည်ဆိုလျှင် အိမ်အနီး၌ သုသာန်အနီး၌ တစ္ဆေ၊ ပြိတ္တာဖြစ်နေသူလောက်သာ သိခွင့်ရှိသည်။
အကယ်တန္တု သေဆုံးသူသည် ကံအကြောင်းမလှသောကြောင့်
တစ္ဆေသူရဲဖြစ်တိုင်းလည်း သူ့မိသားစုနှင့် အိမ်ရာ အဆောင်အဦး အနီးအပါးမှာ မနေထိုင်ပါ။
မိမိ၏ မိသားစုနှင့် အိမ်ရာ ဥစ္စာအပေါ် စွဲလမ်းတပ်မက်သော တစ္ဆေသူရဲတွေသာ
(၇)ရက် ရည်လည်မှမဟုတ်ဘဲ သေဆုံးပြီး တစ်ရက်၊ နှစ်ရက်အတွင်းမှာပင် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။ ကွယ်လွန်သူကလည်း ပရဒတ္ထုပဇီဝပြိတ္တာဖြစ်နေ၊
တစ်ရက်နှစ်ရက် အတွင်းမှာ ပြိတ္တာဘ၀မှ လွတ်မြောက်လျှင်လည်း လွတ်မြောက်နိုင်ပေလိမ့်မည်။
သို့မဟုတ် ပြိတ္တာဘ၀ အဆင့်အတန်းမြင့်မားနိုင်ပေလိမ့်မည်။
ဤ "အန္တရာရာဘ၀အယူဝါဒ" အပေါ်တွင် ချမ်းမြေ့ ရိပ်သာ ဆရာတော်ကြီးကလလည်း
သေသူရဲ့ အိမ်နားပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဖြစ်စေ လှည့်လည်သွားနေတယ်လို့ အချို့ယူဆကြတာပေါ့။
အိမ်တံခါးကိုလဲ လာခေါက်တယ်။ အိမ်အောက်မှာ ဖြစ်စေ၊ အိမ်ထဲမှာဖြစ်စေ၊ ခြေသံ တရှပ်ရှပ်နဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားနေတယ် စသည်ဖြင့် ယူဆစွဲလန်းကြတယ်။
သူရဲ၊ တစ္ဆေဘ၀မှ ကျွတ်လွတ်သွားတယ်။ အဲဒီလို ကျွတ်လွတ်သွားပြီးမှပဲ သူရောက်ထိုက်တဲ့ နောက်ဘ၀တစ်ခုကို ရောက်သွားရတယ်လို့ အများအားဖြင့် ယူဆစွဲလမ်းကြတယ်။
သေလေပြီးလျက် အစားလာ၍ စားဦးမည်ဟု ခွက်နှင့် ထမင်းကို
ပဋိသန္ဓေစိတ်ဖြစ်မြဲ ဖြစ်သည်။ သေခြင်းတိစိတ် နှင့် ပဋိသန္ဓေ စိတ်အကြားမရှိ။
ထို့ကြောင့် သေပြီးသော အသက်ဝိညာဉ်သည် အိမ်မှာ (၇)ရက်နေပြီးမှ
လူသေသောအခါ (၇)ရက်မလည်မီ တစ္ဆေသူရဲ ၀ိညာဉ်ဘ၀နှင့်
ထေရ၀ါဒဗုဒ္ဓဓမ္မနှင့် ဆန့်ကျင်ဖီလာဖြစ်သော အယူဝါဒဖြစ်သောကြောင့်
Posted by Oasisthetoo at 4:04 AM No comments: Links to this post
၂၆.၃.၂၀၁၃ တပေါင်းလပြည့်နေ့မှာ ကျေးဇူးရှင်များကို ရည်စူး လူဒါန်းမှု့ပြုခဲ့ပါတယ် လှူဒါန်ပြီးကုသိုလ်များကိုလဲ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေ ခဲ့ပါတယ် ထပ်တူထပ်မျှ အမျှရပြီး ချမ်းသာကိုယ်စိတ် မြဲကြပါစေ။အမျှ အမျှ အမျှ..................
Posted by Oasisthetoo at 3:55 AM No comments: Links to this post
http://buddhismbeams.blogspot.com/2013/03/blog-post_2812.htmlဗုဒ္ဓဘာသာမှာ ကျား/ မ ခွဲခြားထားတယ် ဆိုတာ ဘုရားရှင်ပညတ်ချက်အနေနဲ့ ထင်ရှားမရှိပါ၊ ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့ နိုင်ငံယဉ်ကျေးမှု၊ လူမျိုးယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားသည့်အလျောက် မဖြစ်သင့်တာ မဖြစ်အောင်၊ အကုသိုလ် အဖြစ် နည်းပါး အောင်၊ တားမြစ်လိုမှု သက်သက်သာ ရှိနိုင်ပါတယ်၊ နောက်တစ်ချက်အနေဖြင့် နှစ်ပေါင်းများစွာ ယုံကြည်လာကြသော ရှေးရိုးရာ အစွဲအလန်း များနှင့် လောကဓာတ်ဆရာတို့၏ အယူအဆများကလည်း လွှမ်းမိုးလာသောကြောင့်( လွှမ်းမိုးသည် ဆိုသည်မှာလည်း လူတို့ကယုံကြည်လက်ခံ နေသောကြောင့်သာ ) လူတို့၏စိတ်ကို တဖက်စောင်းနင်းဖြစ်စေ သည်ဟု ထင်ပါသည်။
Share လေးတစ်ချက်နှိပ်သွားလိုက်ပါ သင့်အတွက် အပန်းမကြီးဘူးဆိုရင်
Posted by Oasisthetoo at 3:09 AM No comments: Links to this post
ရေသောက်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူး
၁၈။ ပိုမို ငယ်ရွယ်၍ ကျန်းမာစေအောင် ဖန်တီးပေးနိုင်ခြင်း။
Posted by Oasisthetoo at 11:23 PM No comments: Links to this post
CDMA ဖုန်းများတွင် အသုံးပြုခဲ့သော ငွေလွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း စနစ်အား GSM ဖုန်းများတွင်လည်း အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်ကြောင်းWCDMA ဖုန်းများ ငွေလွှဲပြောင်း ပေးပို့ရာတွင် ပထမဆုံးအနေဖြင့် *123* ကို နှိပ်ရမည်ဖြစ်ပြီး ယင်း၏ နောက်တွင် မိမိဖြည့်သွင်းမည့် ငွေဖြည့်ကတ်၏ နံပါတ်များအား ရိုက်ထည့်ရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေဖြည့်ကတ် နံပါတ်များအား ဖြည့်သွင်းပြီးပါက * ကို ထပ်မံနှိပ်ပြီး ယင်း၏နောက်တွင် မိမိငွေလွှဲပြောင်း ပေးပို့လိုသော ဖုန်းနံပါတ်ကို ဖြည့်သွင်း ရမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ထိုနောက် #Key ကိုနှိပ်ပြီး Call ကို နှိပ်လိုက်ပါက မိမိငွေလွှဲပြောင်း ထည့်သွင်းပေးလိုသော ဖုန်းသို့ လွှဲပြောင်းငွေ ရောက်ရှိသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ငွေလွှဲပြောင်းရာတွင် နံပါတ်မှားယွင်းခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်က မိမိဖြည့်သွင်းသော ငွေဖြည့်ကတ်နံပါတ်များ မှားယွင်းနေကြောင်း Message ပြန်လာမည်ဖြစ်ပြီး ပြန်လည် လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း
Posted by Oasisthetoo at 2:31 AM No comments: Links to this post
ရွှတိဂုံစေတီတော်ကြီး၏ ဌါပနာတိုက် ►
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် မြန်မာလူမျိုးတို့ ရဲ့ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာ စေတီတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ကြီးအောက်မှာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျအလိုက် အနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ ( ၁ဝ ) ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းနဲ့ အဲ့ဒီရေတွင်းထဲမှာ ( ၆ ) ပေခွဲလောက် ရှိပြီး ရတနာများစီချယ်ထားတဲ့ ရွှေလှေတစ်စီး ရှိတယ်လို့ မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံဖူးခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံဖွား အာမေးနီးယားလူမျိုး ဒီအက်စ်အပရမေ က ပြောကြားခဲ့တယ်လို့ ( ၁၃.၃.၆၈ ) နေ့ ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစားမှာ ဖော်ပြခဲ့တာကို ကျီးမနိုးတင်ဝင်း ( ပေါင်းတည် ) ရဲ့ ပြန်လည်ဖော်ပြချက်အရ သိရှိရပါသည်။
မစ္စတာအပရမေ ကို ကြေးမုံသတင်းစာက တွေ့ ဆုံးမေးမြန်းရာ ၁၉ဝ၄ ခု၊ သူ့ ရဲ့အသက် ( ၇ ) နှစ်အရွယ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ အတူ ရွှေတိဂုံဘုရားသို့ သွားရောက်ခဲ့တယ်။ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော်ရဲ့ အရှေ့ မြောက်ထောင့်၊ တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ ဌာပနာတိုက်ဝကို ရောက်တဲ့အခါမှာ ရသေ့ကြီးတစ်ပါးနဲ့ တွေ့ လို့ ချဉ်းကပ်တောင်းပန်ပြီး ဌာပနာတိုက်ထဲကို ဆင်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ရသေ့ကြီးရဲ့ ခွင့်ပြုချက်အရ ဌာပနာတိုက်ထဲသို့ ဆင်းသွားတဲ့ လမ်းတလျှောက်လုံးမှာ ယောဂီဝတ်နဲ့ နီဝါရောင်ဝတ် ပုဂ္ဂိုလ် ( ၇ ) ဦးကို ( ၈ ) ပေ၊ ( ၉ ) ပေစီ ခြားပြီး တွေ့ ရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဌာပနာတိုက်ရဲ့ ပတ်ပတ်လည်ကို အုတ်များနဲ့ အခန်း ( ၃၆ ) ခန်း တည်ဆောက်ထားတယ်။ အလယ်တိုင် မရှိဘူး။ အလယ်ဗဟိုမှာတော့ ( ၁ဝ ) ပေ ပတ်လည်လောက်ရှိတဲ့ ရေတွင်းရှိတယ်။ ရေတွင်းဟာ ပင်လယ်ရေ အတက်အကျအလိုက် ရေအနိမ့်အမြင့် ဖြစ်ပေါ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ရေတွင်းထဲမှာ အလျား ( ၆ ) ပေခွဲခန့် ရှိပြီး ကျောက်မျက်ရတနာများနဲ့ စီချယ်ထားတဲ့ ရွှေကရဝိတ်လှေ တစ်စင်းရှိတယ်။ လှေဟာ ဒီရေအတက်အကျအလိုက် ရေတွင်းထဲမှာ အနိမ့်အမြင့် လှုပ်ရှားနေတယ်။ ကရဝိတ်လှေပေါ်မှာ ဆံတော်များလို့ ယူဆရတဲ့ ဌာပနာတွေ ကိန်းဝပ်လျှက်ရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဝါလွှမ်းထားလို့ ဆံတော်လို့ အတိအကျ မပြောနိုင်ပါဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဌာပနာတိုက်ရဲ့ ထူးခြားချက်မှာ တခန်းလုံး ထိန်လင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုတည်းသော အလင်းရောင်ဟာ အချိန်မခါမရွေး လှေပေါ်ကို အချိန်မရွေး ထိုးစိုက်ကျရောက်နေတယ်။
ထုထည်ကြီးမားလှတဲ့ စေတီအဆောက်အအုံကြီးကို ပင်မအလယ်တိုင်မပါ၊ သံယက်မ မရှိပဲ ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများနဲ့ သာ တည်ဆောက်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေ ဝင်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်နဲ့ အလင်းရောင်ယူထားပုံက ရှေးဗိသုကာတွေရဲ့ လက်ရာဖြစ်တယ်။ ခမ်းနားဆန်းကြယ်တဲ့ ဌာပနတိုက်ကို ကိုယ်တိုင်တွေ့ မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်လို့ နှောင်းလူတွေ သုတေသနပြုနိုင်အောင် ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ ကို မြေပုံဆွဲလို့ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံဂေါပကအဖွဲ့ ကလည်း မစ္စတာအပရမေ ကို တွေ့ ဆုံမေးမြန်းပြီး ဌာပနတိုက် တည်နေရာကို လိုက်လံပြသစေတဲ့အခါမှာ ဌာပနတိုက် လှိုဏ်ဂူဟာ ရွှေတိဂုံရင်ပြင်တော် တနင်္ဂနွေထောင့်ရှိ ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားနှင့် ဆုတောင်းပြည့် တန်ဆောင်းနေရာမှာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပေမယ့်လည်း နောက်တိုးတန်ဆောင်းတွေနဲ့ ဘုရားများ ထပ်မံမွမ်းမံပြင်ဆင်ထားမှုကြောင့် အတိအကျပြသနိုင်ခြင်း မရှိပဲ ဆုတောင်းပြည့်စေတီရဲ့ လှိုဏ်ဂူအောက်မှာသာ ရှိတယ်လို့ ခန့် မှန်းညွှန်ပြ သွားနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
မစ္စတာအပရမေ ကို လွစ္စလမ်း ( ယခုဆိပ်ကမ်းသာလမ်း )၊ အမှတ် ( ၂၅ ) မှာ ( ၁၈၉၅ ) ခုနှစ်က ဖွားမြင်ခဲ့တာပါ။ မိဘများမှာ မစ္စတာအက်စ်အပရမေ နဲ့မစ္စက်ရိုစ်လူကပ်စ် တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာအမျိုးသမီး ဒေါ်သိန်းရွှေ နဲ့ အိမ်ထောင်ကျပြီး သားသမီး ( ၅ ) ယောက် ထွန်းကားခဲ့ကာ သားသမီးမြေးများနဲ့ အတူ ဘောက်ထော်မှာ နေထိုင်တယ်လို့ သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
မစ္စတာအပရမေ ကို ယနေ့ ထုတ် ကြေးမုံက တွေ့ ဆုံမေးမြန်းပြီး ( ၁၃.၃.၆၈ ) နေ့ မှာ ဖော်ပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ တွေ့ ဆုံမေးမြန်းချိန်မှာ မစ္စတာအပရမေ ဟာ ( ၇၃ ) နှစ် ရှိပြီလို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေ ယုံကြည်ကိုးကွယ်တဲ့ ရွှေတိဂုံဘုရားကြီးရဲ့ အောက်ပေ ( ၆ဝ ) ခန့် အကွာမှာ တည်ရှိတဲ့ ဆံတော်တွင်း ဌာပနတိုက်ကြီးအကြောင်းကို နှောင်းလူများ သိရှိစေရန် ထပ်မံဖော်ပြရခြင်း ဖြစ်ပါတယ်
Posted by Oasisthetoo at 7:34 PM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 5:32 PM No comments: Links to this post
Posted by Oasisthetoo at 5:43 PM No comments: Links to this post
မိုးကုတ် ဖေါင်တော်ဦးဘုရားနဲ့ ရွှေပလ္လင် ၊ငွေပလ္လင်တွေလေ ဖူးမျှော်ကုသိုလ်ယူနိုင်ပါစေ
Posted by Oasisthetoo at 5:38 PM No comments: Links to this post